म रोमान्टिक छु
अशोकप्यासी रार्इ शुक्रवार, साउन २७, २०७४ 5378 पटक पढिएको
दुई वर्षअघिको कुरा हो । ईशा चौधरी नयाँदिल्लीमा थिइन् । एकजना भारतीय केटा साथीसँग डिनर गर्न गएकी थिइन् । रेस्टुराँका वेटरले ठूलो बुके, सेम्पेन ल्याएर टेबुलमा राखिदिए । ईशासँग डिनर गएका केटोले घुँडा टेके । शिर निहुराए अनि त्यो बुके ईशालाई थमाइदिए । बुकेमा लेखिएको थियो, 'विल यु माई गर्लफ्रेन्ड ? ' ईशा अक्क न बक्क परिन् । यताउता हेरिन् । अनि अँ... अँ... गर्दै अन्तिममा 'नो' भनिदिइन् । ईशाको जीवनमा यस्ता धेरै स्मणीय क्षणहरू छन् । उनीसँग मायाको साइनो जोड्न विभिन्न शैलीमा उनलाई प्रस्ताव राखिएका छन् । 'मलाई सैयौंले विवाह एवं प्रेमका लागि अफर गरेका छन्', ईशा भन्छिन्, 'सामाजिक सञ्जालका कारण अहिले सबैलाई एक्सेस छ।'
अहिलेको युगमा कुन मोडेल नायिकालाई ग्ल्यामरस बन्ने चाहना हुँदैन ? तर ग्ल्यामरस, सेक्सी, हट भए पनि प्रभावकारी अभिनय भएन भने खल्लो लाग्छ । त्यस्तो हुन दिन्नँ भन्ने आत्मविश्वास ममा छ ।
भारतीय टेलिभिजन च्यानल एमटीभीबाट प्रसारण हुँदै आएको डेटिङ रियालिटी सो 'स्प्लिटस्भिल्ला'को दसौं संस्करणमा प्रवेश पाएपछि अहिले ईशा चर्चामा छिन् । विभिन्न मुलुकमा भएको अडिसनमा सैयौं मोडेललाई उछिन्दै उनी उत्कृष्ट ११ मा पर्न सफल भएकी छन् । अभिनेत्री सन्नी लियोन र रणविजयले होस्ट गर्दै आएको यो रियालिटी सो निकै लोकप्रिय छ । ललितपुर भैंसेपाटी निवासी उनले नेपालका विभिन्न फेसन सोमा क्याटवक गरेकी छन् । एमटीभीको 'स्प्लिटस्भिल्ला'बाट करिअर सुरु गरेकी उनी अभिनय यात्रा आरम्भ गर्ने तयारीमा छिन् ।
'स्प्लिटस्भिल्ला'को दोस्रो संस्करण हेरेदेखि नै उनलाई यस रियालिटी सोमा जाने रहर जागेको हो । त्यो सपना १०औं संस्करणमा पूरा भयो । 'स्कुलमा साथीहरू डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर बन्छु भन्थे तर म 'स्प्लिटस्भिल्ला'मा गएर माया खोज्छु भन्थेँ', ईशाले भनिन्, 'म सन्नी लियोनको ठूलो फ्यान हुँ । सोमा उनलाई भेट्दा, बोल्दा म बेहोशै भएँ ।' ईशाका अनुसार यस सोका विजेताले विग बोसको आगामी सिजनमा प्रवेश पाउनेछ । 'नेम, फेम, पुरस्कारसँगै बलिउडका लागि ढोका खुल्न पनि सक्छ', उनले भनिन्, 'सो एकदमै रमाइलो छ तर किसिङ एपिसोड देख्दा ममी, अंकल, आन्टीलाई चाहिँ नहेर्नु भन्नुपर्ला ।'
म जस्तो सोच राख्छु, हाम्रो समाजमा त्यस्तो सोच कमैमा मात्रै होला । २० वर्षकी भएँ । रोमान्टिक स्वभावकी छु । मलाई ठूला प्रपोजल, पैसा, लुक्सभन्दा पनि मेरो मान्छे रोमान्टिक, स्पार्क अनि म्याजिक होस्जस्तो लाग्छ ।
ईशालाई अभिनय, मोडलिङ र भीजेमा रुचि छ । 'चलचित्रका लागि कुरा हुँदैछ । मैले राम्रो कुराको अपेक्षा गरेको छु । सपना ठूलो छ तर भाग्य पनि चाहिन्छ', उनले भनिन्, 'म चलचित्रमा प्रवेश गर्ने बेलामा यो क्षेत्रको जुन उचाइ छ, त्यसले मलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।' उनको अनुभवमा कतिपय कलाकार वर्षौंसम्म थिएटरमै अल्झिरहेका छन् । तर, केहीले केही नसिकी एकैपटक फिल्ममा डेब्यु गरेर तहल्का मच्चाएका उदाहरण पनि छन् ।
त्यसैले अभिनयमा राइट टाइम, राइट टिम, राइट प्लेस र लक चाहिन्छ भन्ने उनको मान्यता छ । चलचित्र ड्रिम्स, चपली हाइट टु, लुटजस्ता चलचित्र हेरेकी उनी आफूले चाहेजस्तो हुने भए अनमोल केसीसँग चलचित्रमा डेब्यु गर्न चाहन्छिन् । अभिनेतामा राजेश हमाल, भुवन केसी र अनमोल केसीकी फ्यान उनी अभिनेत्रीमा निशा अधिकारी र परामिता राणाबाट प्रभावित छिन् ।
कोहीसँग मेरो मन बसेको छ । ऊसँग केमेस्ट्री, कनेक्सन मिल्छ । तर, विवाह गर्ने सोच तय भएको छैन । मलाई साँच्चिकै माया गर्छ, करिअरलाई साथ दिन्छ भने विवाह हुन पनि सक्छ । विवाह अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ ।
आफूलाई फिट एन्ड फाइन राख्न हल्का व्यायाम गरी खानपानमा ध्यान दिने गर्छिन् । 'चिकेन अलि बढी खान्छु । स्मोक गर्दिनँ । ड्रिंक्स हल्कामात्र गर्छु । पानी धेरै पिउँछु', उनले भनिन् । चिकेन बढी खाने बानीले मेनटेनमा अलि गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ । आफू कसैको मनमा बसेको र सो कुरा 'स्प्लिटस्भिल्ला' हेरेपछि दर्शकले थाहा पाउने उनको भनाइ छ । विवाहभन्दा लिभिङ टुगेदरको फाइदा भए पनि आफू त्यो पक्षमा नरहेको उनी बताउँछिन् । 'पछिल्लो समय धेरै डिभोर्स भइरहेको छ । लिभिङ टुगेदरमा गयो भने ब्रेकअप हुन्छ डिभोर्स हुँदै', ईशाले कारण भनिन्, 'डिभोर्स हुँदा दुई परिवारको भावना पनि भत्किन्छ । कति पैसा सकिन्छ । मलाईचाहिँ विवाह गरेरै लगोस् जस्तो लाग्छ ।'
शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्न : भारतसँग कुरा गर्न किन डराउने? 2835
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलार्इ प्राथिमकता, यस्तो छ तयारी 1223
'एमालेलाई सिध्याउन कांग्रेससँग सहकार्य' 44074
दिल्लीसँग बार्गेनिङको हैसियतमा नेपाल 401
प्रिन्सिपलसँगको अवैध सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएपछि ट्‍वाइलेटमा लगेर हत्या.. 27140
आरजुको राहतले भूकम्पपीडित दंग 14063
काठमाडौंमा इन्टरनेटको नीति, कानूनी प्रयोगबारे सेमिनार सुरु 354